को बन्ला नयाँ सशस्त्र प्रहरी आईजीपी ? खनाल मुख्य दाबेदार| Nepal Pati
को बन्ला नयाँ सशस्त्र प्रहरी आईजीपी ?
काठमाडौं । आगामी २९ चैतमा वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सशस्त्रको भावी नेतृत्वका लागि दौडधुप सुरु भएको छ ।
भावी महानिरीक्षक (आईजीपी) का लागि वरिष्ठताका हिसाबले अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल एक्ला दाबेदार भए पनि अन्य एआईजी पनि नेतृत्वमा पुग्न चर्काे लबिङमा छन् । विशेषगरी खनालभन्दा ११ महिनापछि एआईजी बनेका पुष्पराम केसी र नारायणबाबु थापा पनि आईजीपी बन्न तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् ।
ओली सरकारको यो निर्णयविरुद्ध केसी र तत्कालीन डीआईजी उत्तम खड्काले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर, लोकसेवा आयोगले ओली सरकारको निर्णय ठीक भएको भनेपछि डीआईजी खड्काले सर्र्वाेच्च अदालतलाई गुहारेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले समेत खनालको बढुवा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय सही रहेको ठहर गरेको थियो ।
खनाल एआईजीमा बढुुवा भएदेखि हालसम्म सशस्त्रको तालिम हेर्ने मानवस्रोत विकास विभाग (एचआरडी) मा कार्यरत छन् । केसी कार्यविभाग, थापा महानगरीय कार्यालय र पौडेल सशस्त्रको एकेडेमीमा प्रमुख छन् । राजधानीबाट